Meeqa Milyan ayuu ku kacayaa dalabka ay kooxda Manchester City ka gudbinayso Kalidou Koulibaly? – Gool FM
(Manchester) 19 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay isku dayeyso inay dalab qiimo sare ka gudbiso difaaca diiradda lagu wada hayo ee Kalidou Koulibaly.
Difaacan dhexe ayaa qudhiisa la soo warinayaa inuu doonayo inuu ka hoos ciyaaro Macallinka reer Spain ee kooxda Manchester City, Pep Guardiola.
Jariiradda Talyaaniga ka soo baxda ee Gazzetta dello Sport ayaa warinaysa in kooxda Manchester City ay qarka u saaran tahay inay dalab ku kacaya 95 milyan oo euro oo u dhiganta 85 milyan oo gini ka gudbiso difaaca naadiga Napoli ee Kalidou Koulibaly.
Saxiixyada macquulka ah ee James Rodriguez iyo Hirving Lozano ayaa ku qasbi doona kooxda ka dheesha horyaalka Serie A inay iibiso ciyaaryahan muhiim ah xagaagaan, Man City ayaana dooneysa inay ka faa’iideysato arrintaas.
Kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa aad u doonaya saxiixa difaacan xoogga weyn ee Kalidou Koulibaly.
Xiddiga xulka qaranka Senegal ee Koulibaly ayaana doonaya laftiisu inuu ka hoos shaqeeyo tababare Pep Guardiola haddii dalabku soo baxo, sida warbixinnada lagu helayo.